sosegado : October 2010
ပီကာဆို နှင့် ပုံမှန်မဟုတ်သူများကို ခံစားကြည့်ခြင်း
Art ကို မြန်မာလို အနုပညာလို့ ဆိုကြပါသည်၊ ဘေးကတစ်ယောက်ကငြင်းပါသည်၊ dictionary ထဲမှာ မဟုတ်ဘူးတဲ့၊ မဟုတ်ရင်ဘာလဲဆိုပြီးတော့၊ ကျနော်တို့မှာရှိတဲ့ တစ်အုပ်တည်းသော dictionary, မော်ဒန် အင်္ဂလိပ် မြန်မာ အဘိဓာန်ကို လှန်ကြည့်ကြမိသည်၊ ဘေးကတစ်ယောက် ပြောတာမှန်နေသည်၊ အဘိဓာန်ထဲတွင် art ကို လက်တွေ့ကျွမ်းကျင်မှု၊ စဉ်းလဲကောက်ကျစ်ခြင်း၊ လက်စွမ်းလက်စ၊ ဝိဇ္ဇာပညာဟုဆိုထားသည်၊ ကျနော်ကလည်း အလျှော့မပေး ဆက်ရှာသည်၊ artist ကို အနုပညာရှင်လို့ ဆိုသည်၊ art ကနေ artist ဖြစ်လာတာ ဆိုပြီး သူ့ကိုစောဒကတက်သည်၊ သူကတော့ ဒီမှာကြည့် art ကို မြန်မာလို အနုပညာလို့မပါဘူး၊ လက်တွေ့အရသူမှန်နေသည်၊ နောက်ဆုံး online ထဲက windows Myanmar translator ကိုဝင်ပြီး art ကိုရိုက်ထည့်လိုက်တော့ အနုပညာ ဆိုပြီးထွက်လာသည်၊ ဘေးကတစ်ယောက်က ဆက်မငြင်းတော့ အဘိဓာန်၏ အားနည်းချက်လို့ သဘောတူ သတ်မှတ်လိုက်ကြသည်၊ ချစ်သူမို့ အလျှော့ပေးလိုက်သည်လားတော့မသိ။
အနုပညာသည် အမျိုးမျိုးရှိသည်ဆို၏ အက၊ အဆို၊ အရေး၊ အပြော၊ အပြ စသဖြင့်ရှိမည်၊
အနုပညာကို ခံစားဘူးသလားမေးရင် အားလုံးနီးပါး ခံစားဘူးတာပေါ့လို့ ဖြေကြပါလိမ့်မည်၊
အကကောင်းလိုက်တာ အချိုးကိုပြေလို့၊ သီချင်းထဲမှာနစ်မျောသွားတာပဲ၊ ပြကွက်တွေသရုပ်ပါတော့ ငိုတောင်ငိုရတယ်၊ ကဗျာရွတ်သွားလိုက်တာ နားထောင်ပြီး ကြက်သီးတောင်ထတယ်၊ ဆွဲထားတာကြည့်ဦး အရောင်တွေက လှမှလှ စွဲလို့ကျန်ရစ်တယ် စသဖြင့် ခံစားပြီး ပြောကြပါလိမ့်မည်။
အနုပညာရှင်တွေကဘာလဲလို့မေးရင် ဖန်တီးရှင်တွေလို့ အများကဖြေကြပါလိမ့်မည်၊ လီယိုတော်စတွိုင်းကပြောသည် အနုပညာရှင်တွေဟာ ပုံမှန်မဟုတ်သူတွေ၊ ပုံမှန်မဟုတ်လို့လည်း အဆိုကောင်းတယ် သရုပ်ဆောင်ကောင်းတယ် အရေးကောင်းတယ် အတီးကောင်းတယ် ဆိုပြီး သာမန်တွေနဲ့ ခွဲထွက်လာခြင်းဖြစ်သည်။
ဒီမှာလည်း ပုံမှန်မဟုတ် နှင့် သာမန်မဟုတ်ကို ကျနော်တို့ အငြင်းပွားကြသည်၊ windows Myanmar translator ကိုဝင်ပြီး abnormal ကိုရိုက်ထည့်လိုက်တော့ ပုံမှန်မဟုတ်ဟု ဆိုပြီးထွက်လာသည်၊ အဘိဓာန်၏ အားနည်းချက်လို့ပဲ သတ်မှတ်လိုက်ပါသည်။
နောက်ဆုံး ဒေါက်တာလူစီယားက အနုပညာရှင်တို့၏ ဦးနှောက်သည် သူများထက်အခန်းပိုတွေပိုပါသည်၊ အနုပညာ ဖန်တီးမှုအတွက်ဖြစ်သည်ဟုဆိုသည်၊ အခန်းပိုမပါသူတွေကတော့ ဘယ်လောက်ပဲကြိုးစား ကြိုးစား အနုပညာရှင်ကောင်းတစ်ယောက် ဖြစ်မလာနိုင်ဟုဆိုသည်။
ထိုအတူ အနုပညာကို ခံစားဘို့အတွက် ဦးနှောက်ထဲတွင် သူ့အခန်းနဲ့သူရှိသည်ဟုဆိုသည်၊ ထိုသို့မဟုတ်ပါက ဘာမျှမခံစားရပေ ကမ္ဘာကျော်တယောဆရာ တယောထိုးပြနေသည်ကို ဒီကောင် တကျွီကျွီနဲ့ ဘာတွေတီးနေတာလည်းလို့ပြောလိမ့်မည်၊ မိုက်ကယ်ဂျက်ဆင်ကနေတာကို ဒီကောင်မျောက်လိုခုန်နေတယ်လို့ ဆိုကြပါလိမ့်မည်၊ ကဗျာတွေရေးထားတာကို ပေါက်တတ်ကရတွေ ရေးထားတာလို့ ပြောပါလိမ့်မည်။
ဒေါက်တာလူစီယား၏ အဆိုကို ကျနော်ဟာကျနော် ပြန်သုံးသပ်ကြည့်သည်၊ အနုပညာကို ငါတကယ် ခံစားတတ်ပါသလား?
ခံစားတတ်တာပေါ့၊ ရုပ်ရှင်ဆိုလည်းကြည့် အငြိမ့်ဆိုလည်းကြည့်၊ သီချင်းတွေဘာခံစားသလဲမမေးနဲ့ ကိုယ်မသိတဲ့ဘာသာနဲ့ ဆိုထားတဲ့ သီချင်းတွေတောင် နားထောင်လိုက်သေးသည်၊ စာပေဟောပြောပွဲ ကဗျာရွတ်ပွဲတွေလည်း နားထောင်ဖြစ်သည်၊ ကြိုက်သည် ခံစားရသည်။
ကျနော်မှာရှိသည့် မသေချာတာ တစ်ခုကတော့ ပန်းချီ ပန်းပုကိုခံစားကြည့်ခြင်းဖြစ်သည်၊ လက်ရာမြောက်လိုက်တာ၊ အရောင်တွေကစို လှလိုက်တာ ဒီလောက်ပဲဖြစ်သည်၊ သီချင်းတို့ ပြဇာတ်ရုပ်ရှင်တို့လို အထဲထိ ဝင်ရောက်မခံစားရ၊ ဒီမှာဘက်တွင် ကျနော် အခန်းလိုနေလိမ့်မည်၊
Emotion နှင့် Feeling ရောထွေးနေခြင်းဖြစ်မည်၊ ပန်းချီ ပန်းပုကိုခံစားတတ်သည် အခန်းမပါ၍၎င်း နည်းနေ၍၎င်း ဦးနှောက်က judge မလုပ်နိုင်တာလည်းဖြစ်နိုင်သည်။
ဒါပေမဲ့ ပန်းချီကားတစ်ချို့ကိုတော့ လှလို့ဝယ်ခဲ့ဘူးသည်၊ ဦးပိန်တံတားပေါ်မှ နှစ်ကား၊ ဘာလီနှင့် ပီကင်း ရောက်တုန်းက အမှတ်တရ တစ်ကားစီဝယ်ဖြစ်ခဲ့သည်၊
အဲဒီလို ပန်းချီ ပန်းပုကိုမခံစားတတ်သူတစ်ယောက်သည် ပီကာဆို ပန်းချီပြပွဲကို ရောက်ခဲ့သည်။
ပြောင်မြောက်တဲ့ အနုပညာရှင်တစ်ယောက်ဟာ အခန်းပိုတွေများသည် အတွက် ဖန်တီးနိုင်မူစွမ်းအား ပိုကောင်းသည်ဟုဆိုသည်၊ သာမန်ထက်ကျော်လွန်ခဲ့လျှင်မူ မျှခြေမှာမရှိပဲ အစွန်းရောက်သွာကြသည်ဟု ဒေါက်တာလူစီယားက ဆိုလိုက်ပြန်သည်၊ ထိုအထဲတွင် ပီကာဆိုလည်းပါဝင်သည်၊ အပြာခေတ် နှင်းဆီခေတ် အာဖရိကန်ခေတ် ဆိုပြီး အရောင်တွေမှ အစပြုကာ ကျူပဇင်း Cubism အပါအဝင် အသစ်သစ်တွေကို တီထွင်ဖန်တီးခဲ့သည်။
ပီကာဆို၏ သမိုင်းနဲ့ ကိုယ်ရေးအကျဉ်းချုပ်ကို တစ်စုံတစ်ယောက်က တက်ဖတ်နေသည်၊ စပိန်မှာမွေး ပြင်သစ်ကို အခြေခံသူ၊ Barcelona နှင့် Paris တွင်ကျင်လည်ခဲ့သူ၊ ကွန်မြူနစ် အနုပညာသည်ဟုခံယူထားသည်၊ လီနင်ငြိမ်းချမ်းရေးဆုကိုရခဲ့သည်၊ ဆယ်ကျော်သက် မိန်းခလေးများကို စိတ်ဝင်စားသူ၊ မွေးရာပါအခွင့်အရေးဟုဆိုကာ တစ်ခါတစ်လေ ဘာမှမဝတ်ဘဲ ပန်းချီဆွဲသူ စသဖြင့်ဂုဏ်ပြုပြောကြားသွားသည်၊ သေချာသွားပြီ ပီကာဆိုသည် အောင်မြင်သော အနုပညာရှင်၊ ဒါဆို ပုံမှန်မဟုတ်၊ ပန်းချီကားတစ်ခုတွင် ရေးထားသည်ကိုကြည့်ဦး ဇောက်ထိုးကြည့်ပါ။
ပုံမှန်မဟုတ်လို့ နာမည်ကြီးတာလား၊ နာမည်ကြီးလို့ ပုံမှန်မဟုတ်တာလား။ ပုံမှန်မဟုတ်သူတစ်ယောက်နဲ့ နေထိုင်ခြင်းကို သိလိုလျှင် Life with Picasso စာအုပ်တွင်ပါသည်။
ဒေါ်လာ သန်းရာနဲ့ချီတန်သော ပန်းချီကားတွေရှေ့ ကျနော်ရောက်ခဲ့သည်။
တွေးမိသည်မှာ ဒီပန်းချီကားကြီးကို ဒေါ်လာ သန်းရာနဲ့ချီ ပေးဝယ်ရတယ်လို့၊ ရုပ်လုံးကြွနေတာကလွဲလို့ ဘာမှ မထူးဆန်း၊ ဒီဘက်ကဟာကို သေချာနားမလည် မိန်းမပုံတော့ဖြစ်မည်၊ ဒေါ်လာ သန်းနှစ်ရာ ဆိုပါလား၊ ဟိုပန်းချီကားလေးကကောင်းသည် ကလေးလေးပုံ ဆွဲထားတာလှသည်၊ အဲဒါကြတော့ ဒေါ်လာတစ်သန်းပဲတန်သည်တဲ့၊
အရင်တုန်းက ဟာသလေးတစ်ခုဖတ်ဘူးသည်၊ သားက အမေကို၊ အမေ ဒီမှာ ပန်းချီကားတစ်ချပ် ၅ သိန်းနှင့်ဝယ်လာတယ် ဘယ်လောက်လက်ရာမြောက်လည်း လာခံစားကြည့်ပါအမေ၊ အမေက လာကြည့်ပြီး၊ သားရယ်ဒီပုံကြီးများ ၅ သိန်းပေးရတယ်လို့၊ ကိုရီးယားမင်းသား၊မင်းသမီး ပုံတွေဝယ်လာတာက ပိုပြီး ကြည့်ပျော်ရှုပျော် ရှိဦးမယ်၊ သားလည်း တိန် ခနဲမြည်သွားသည်။
လီယိုတော်စတွိုင်းကဆိုပြန်တယ် ပန်းချီကားတိုင်းမှာ အနုပညာမရှိဘူး၊ ခံစားမှုပါမှ အနုပညာတဲ့၊ ဒီတစ်ယောက်က မခံစားပေမဲ နောက်တစ်ယောက်က ခံစားမိရင်ရောလို့ မေးခွန်းပြန်ထုတ်ကြပါတယ်၊
ဘေးကတစ်ယောက်ကဆိုသည် စာရေးတာလည်း အနုပညာပဲတဲ့၊ ဘလော့ဂ်ရေးတာလည်း စာရေးတာပဲတဲ့၊
ဘလော့ဂ်ရေးတာက ကိုယ်ရေးချင်တာရေးတာလေဟု ပြန်ဖြေလိုက်ပြီးမှ၊
တစ်ချို့ဖန်တီးထားတာလေးတွေ တော်တော်ကောင်းသည်၊ တစ်ချို့က စတိုင်လေးတွေရှိသည်၊ ကိုယ်ပိုင်ဟန်လေးတွေရှိသည်ကိုသတိရမိသည်၊ စဉ်းစားရခက်နေစဉ်၊ နောက်ထပ်မေးလာပြန်သည်၊
ဘလော့ဂ်ရေးသူတစ်ချို့ဟာ ဖန်တီးသူတွေပဲပေါ့၊ ဒါဆိုရင် ဘလော့ဂ်ရေးတဲ့သူတစ်ချို့တွေဟာ ပုံမှန်မဟုတ်ဘူး ဟုတ်တယ်မဟုတ်လား၊?
အဲဒီ ဒေါက်တာမှားရင်မှားမှာပေါ့ ၊ ဒါမှာမဟုတ် အဘိဓာန်၏ အားနည်းချက်လည်းဖြစ်မှာပါ၊ ပြန်လည်ပြောလိုက်သည်၊
(လသာည ကို မေးရင်ကောင်းမလား၊ သူကစိတ်ပညာရှင်)
ပီကာဆို ဆုရသွားတဲ့ လက်ရာ ကိုရီးယားစစ်
ပီကာဆိုပြပွဲ လက်ကမ်းစာစောင် မှ ပုံများ၊
တစ်ချို့က အနီးကပ်၊ တစ်ချို့က ကိုင်ကြည်ချင်ကြတယ်၊
ပုံမှန်မဟုတ် သို့မဟုတ် သာမန်မဟုတ် (ဆင်တဲကဖေးက ပုံမှန် ကိုပြောခြင်းမဟုတ်)
Art by Leo Tolstoy
Expressive Arts Therapist Dr. Lucia Capacchione
The Journal of Neuroscience;Brain Structures of artist
The activity of art is based on the fact thataman, receiving through his sense of hearing or sight another man's expression of feeling, is capable of experiencing the emotion which moved the man who expressed it. To take the simplest example; one man laughs, and another who hears becomes merry; oraman weeps, and another who hears feels sorrow. A man is excited or irritated, and another man seeing him comes toasimilar state of mind. By his movements or by the sounds of his voice,aman expresses courage and determination or sadness and calmness, and this state of mind passes on to others. A man suffers, expressing his sufferings by groans and spasms, and this suffering transmits itself to other people;aman expresses his feeling of admiration, devotion, fear, respect, or love to certain objects, persons, or phenomena, and others are infected by the same feelings of admiration, devotion, fear, respect, or love to the same objects, persons, and phenomena.
by Leo Tolstoy (1828-1910),
ပီကာဆိုပြပွဲ လက်ကမ်းစာစောင် မှ ပုံများ၊ New York, USA
Museum of Modern Art, Metropolitan Museum of Art, New York, USA
LACMA Los Angeles, California USA.
တို့မှ ရိုက်ကူးခဲ့သော ကိုယ်ပိုင်ဓါတ်ပုံများဖြစ်ပါသည်။
Posted by sosegado at 10/22/2010 08:22:00 PM 33 comments Links to this post
Posted by sosegado at 10/09/2010 09:32:00 PM 34 comments Links to this post